Kuwedzeredzwa, Zvikamu, MaModule & Mapulagi eJoomla! - Joomla Mhinduro
Joomla-Solutions.com Mawedzero eCMS Joomla!
Unyanzvi hwangu hwaJoomla
Joomla kana WordPress?
Gadzira webhusaiti naJoomla
Mangani mawedzero andingaisa munaJoomla?
Ndezvipi zvekuwedzera kusarudza kuti ugadzire masosi eJoomla?
Nzira yekuisa sei yekuwedzera kana module muJoomla?
Chinja Joomla template
Maitiro ekugadzira webhusaiti naJoomla?
Zvinyorwa - Mafaira
Zvinyorwa - Subscriptions
Zvinyorwa - Mifananidzo
Zvinyorwa - Email ziviso
Zvinyorwa - Zviitiko
Zvinyorwa - Zvakabhadharwa zviitiko
Zvikamu, ma module & plugins eiyo Joomla CMS!
Iyi module inoratidza modal popup hwindo iyo inobvunza mushandisi kuti asimbise zera rake asati asvika peji.
Iyo inokutendera iwe kutarisa zera remushandisi usati wawana peji rakachengeterwa vanhu vakuru, semuenzaniso.
Iyi plugin inowedzera chikamu cheBiografics kune profiles yemushandisi. Yakanyanya basa yekuwedzera zvakapfuma zvemukati uye kudzidza zvakawanda nezve munhu.
JoomlAddComments Kwese Kwese
Iyi pasuru yeJoomla inosanganisira chinhu uye module inokutendera iwe kuwedzera nzvimbo dzekutaura pane chero peji rewebhusaiti yako.
Iyi plugin inokutendera iwe kuti uwedzere mufananidzo wepamoyo kune Joomla mushandisi maakaunzi. Kurumidza uye nyore kuisa uye kumisikidza.
Iyi plugin inobvumira vashandisi kupinza vhidhiyo yeImusoro muprofita yavo.
Iyi Joomla plugin inokubvumira kuti utumire chinyorwa kana kuiswa kwayo neemail kune boka revashandisi kana email kero.
Iyi plugin inokutendera iwe kuti ubate hukama pakati peJoomla user account.
Iyi paki yemapulagi maviri anotendera iwe kubata zviitiko kubva kuJoomla zvinyorwa.
Iyi plugin inobvumira vashandisi kupinza vhidhiyo yeTikTok muprofita yavo.
Iyi plugin inokutendera iwe kubatanidza runyorwa rwemifananidzo kune Joomla zvinyorwa uye wozviratidza pazasi
Iyi plugin inobvumira kubatanidzwa kwe "Donate" bhatani mune yevashandisi yemafaira.
Iyi plugin inokubvumira kuti ubatanidze mafaera kuJoomla zvinyorwa uye uvape zvemahara kana zvakabhadharwa kurodha kuburikidza neiyo yakawedzera plugin. Zvinyorwa - Subscriptions.
Iyi plugin inobvumira vashandisi kupinza Vimeo vhidhiyo muprofita yavo.
Iyi Joomla plugin inokutendera iwe kuti ushandise zvinyorwa semashizha echigadzirwa. Hapana chikonzero chekumisa yakaoma uye inopedza nguva e-commerce mhinduro yekumisikidza. Iyi plugin inowedzera kutenga kwekushandisa zvakananga kubva pakugadzirisa chinyorwa.
Iyi plugin yeJoomla inobvumira vashandisi kupinza vhidhiyo yeYouTube mune yavo chimiro.
Kugutsikana kana kudzorerwa mari
Kana iwe wakatenga chimwe chezvigadzirwa zvedu uye zvisingaenderane newe, tinopikira kukudzorera iwe zvizere.
Mot haulla passe oublié?
Yedu yekuwedzera ndeye Joomla 3.x inoenderana.
Apache 2.0 uye +
Nginx 1.0 uye +
PHP 5.3.10 uye +
MySql 5.1 uye +
SQL Server 10.50.1600.1 uye +
PostgreSQL 8.3.18 uye +
Shandisa zvinyorwa zveJoomla semashiti echigadzirwa!
Kuvandudzwa kwaJoomla! Wedzerai
Mawedzero uye izvo zvavanopa
Iwo mavara pastilles!
Pasina chinhu ...
Dzvanya apa kuti uwane iyo demo saiti
Ma plugins: Wedzera munda kubva paContentPrepareForm basa
Maitiro ekuchinja Joomla template
Nzvimbo yako Joomla saiti nezvakareruka uye zvakapetwa kuwedzerwa!
Tsvaga pane peji rekumba resaiti yangu, kana kubva kumamenyu, sarudzo yakasarudzika yezvinhu zviri nyore uye zvakapusa zvekuwedzera kune ako maJoomla mawebhusaiti. Iwe unozogona kushandisa angu plugins, ma module uye zvikamu zvekuvandudza yako webhusaiti, blog kana Ecommerce uchishandisa Joomla CMS.
Ini zvakare ndinokupa iwe mamwe makosi uye tutorials pakushandisa Joomla, senzira yekushandisa template, maitiro ekuwedzera chinyorwa chitsva, maitiro ekugadzira chitoro, kugadzira ma module, ongororo uye zvimwe zvakawanda. Iwe uchazoziva zvakawanda pamusoro penyaya dzese dziri kuenderera uye kuti uuye kuburikidza neangu blog
Pakati pezvakakurumbira zvemukati manejimendi manejimendi senge Drupal, Wordpress, Joomla, Jimdo, Prestashop kana kunyange Shopify, ini ndakasarudza Joomla yekugadzira yangu ekuratidzira mawebhusaiti, mablog kana kunyange zvitoro zvepamhepo. Iine mapaneru ayo anoteerera css matemplate anoenderana nema smartphones uye mahwendefa, Joomla nhasi chishandiso chakanakira kugadzira webhusaiti. Iwe une chirongwa here uye unoda kutanga nekukurumidza? Tsvaga zita rako rezita, webhu inomiririra pamwe neayo ftp yekuwana kune iyo inomirira sarudzo yako, saka, isa Joomla uye zvibvumire iwe kuti utungamirirwe mune yayo yakapusa uye intuitive maitiro. Kana iwe uri mugadziri seni, unogona kuenda zvakatowanda nekuvandudza ako awedzerwo. slideshow mifananidzo, mapikicha emifananidzo, mufananidzo mutserendende, majeti, nzira yekuzivisa, kubhadhara mari, maneja maneja, faira maneja, shumo yekutonga system, zera rekutarisa, pakarenda uye chiitiko manejimendi, dhairekitori, kubatanidza vhidhiyo, manejimendi Classified ads etc.
NaJoomla, kugadzira webhusaiti kunokurumidza. Tora mukana weiyo manejimendi manejimendi uye ayo WYSIWYG editors kuti unakidze zvirimo, gadziridza yako yakasarudzika mareferenzi, uonekwe mune dzekutsvaga injini, tora mabhatani uye gonesa kutengesa kwako.
Iri nyore uye intuitive, Joomla ndeyangu akanakisa CMS. Kugadzira yako saiti haina kumbobvira nyore.
Clement, yakakosha mukugadzirwa kwenzvimbo dzeJoomla
Copyright © 2020 Joomla-Solutions.com - Wedzera, zvikamu, ma module uye ma plugins a Joomla.
Joomla! ® zita rinoshandiswa pasi peiyo rezinesi kubva Vhura Tsime Matipi muUnited States nedzimwe nyika.
Joomla-Solutions.com haina hukama ne kana kubvumirwa ne Open Source Matters kana iyo Joomla! Project.
SEO, Web kunyora